ပညာမတတ်ပါ – MM Flash News
မိန်းမ ဒါတွေက ဘာတွေတုန်း တုတ်ချောင်း တွေအဝိုင်းတွေ အတွန့်အတက်တွေနဲ့။ ဘယ်သိမလဲ ရှင့်သား ကိုခေါ်မေး ဟေ့ကောင်သူရ ဒါကဘာတွေတုန်း အာ အဖေကလည်း အဲ့တာ ကိုရီယားစာတွေဗျ ကျွ န်တော်ခုအဲ့ဘာသာစကားတက်ပြီးလေ့လာနေတာ အဖေ ဘာမှနားမလည်ဘဲနဲ့များ။
အေးလေ ငါမသိလို့မေးတာပေါ့ ငါ့မိန်းမသားရဲ့မသိလည်းအေးဆေးနေပါအဖေရာ အဖေကိုရှင်ြး ပလည်းနားလည်မှာမှမဟုတ်တာ။ ဒါကိုဘေးက မိခင်ဖြစ်သူကြားတော့ မျက်နှာလေးညှိုးသွားတယ်။ ဖအေဖြစ်သူက သူ့ဇနီးကိုခေါင်းခါပြတယ်။
အဲ့လိုနဲ့ ညစားထမင်းစားပြီး အိပ်ရာဝင်ခါနီးကြတော့ သားလုပ်သူက အမေ့နားကပ်ပြီး အမေမုန့်ဖိုးပေးဦး မနက်သင်တန်း တက်ရင်သုံးမလို့ရော့သား တစ်သောင်း ခြွေတာသုံး သားတတ်ချင်တာကိုသေချာသင် လူငယ်ဆိုတာ ပျော်တတ်ရတယ် လေ့လာသင့်တာလည်း လေ့လာရမယ်။
သားမအိပ်သေးရင် မင်းအဖေအင်္ကျီတွေမီးပူတိုက်လိုက်ဦး။ အမေ အဖေအင်္ကျီတွေမှာ ပခုံးအသားတွေကအေ ရာင်ဖျော့ပြီးဘာလို့ ပါးနေတာလဲ? မိခင်လုပ်သူက အတော်လေးနူတ်ဆိတ်နေပြီးမှသား သစ်ပင်တစ်ပင်မှာ အသီးတွေသီးဖို့ အကိုင်းအခတ် တွေပင်စည်တွေမရှိပဲဖြစ်ပါ့မလား။
အမေလည်းအဖေ့လိုလည်း ဘာမှမသိဘူး။ ဘာတွေမေးမှန်းမသိဘူး။ ဟုတ်တယ်မင်းအဖေကဘာမှမသိဘူး ဘာမှလည်းမတတ်ဘူး သူတတ်တာနှစ်ခုရှိတယ်သိလား။ ဘာလဲ
သားမှတ်ထားပါ မင်းအဖေပညာတတ်ဘူး ဒါပေမယ့် သူ့လုပ်အားနဲ့တော့မင်းပညာတတ်ဖြစ်နေပြီး ဒါပေမယ့် မင်းကပညာကိုသိပဲသိသေးတာမင်းအဖေလောက် ပညာမတတ်သေးဘူး။ ဟားဟား အမေကလည်း အဖေက မြန်မာစာတောင်ဖြောင့်အောင်မရေးနိုင်တာ ပညာတတ်ဖြစ်မလား။
အမေဖြစ်သူက တစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်တယ် မင်းစီးထားတဲ့ ဖိနပ်တောင် မင်းအဖေ ရင်းထားတဲ့ပညာတွေပါ တယ်။ ပညာဆိုတာဘာလဲသား သိလား သိဖို့တတ်ဖို့ထက် အမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။
ခုသားက သင်ညာသိပဲရှိသေးတယ်။ ပညာရှိမဖြစ်သေးဘူး။ ဘဝမှာ ပညာသိ ၊ပညာတတ် ၊ ပညာရှင်ဆိုပြီး သုံးမျိုးရှိတယ် ကိုယ်တိုင်သိနေဖို့ထက် ကိုယ်သိသလို သူလည်းနားလည်ဖို့ဝေမျှရမယ် အဲ့လို့ဝေမျှဖို့လည်းဆန်သစ်နေရမယ်။
လူတစ်ယောက်က အားလုံးသိပါတယ်လို့ ကြွေးကြော်နေပြီဆိုရင် သေချာတယ်။ သူဘာမှမသိသေးလို့ အတ န်းတက်ပြီး အကန်းဖြစ်နေသမျှတော့ပညာဆိုတာဝေးနေဦးမှာဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ပညာနဲ့ဝေးနေတုန်းပါ လောကမှာ ဘာမှမသိလို့မိုက်တာ ပြင်ပေးလို့ရတယ်။ သိပြီးမိုက်တာက အတော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။
မိနျးမ ဒါတှကေ ဘာတှတေုနျး တုတျခြောငျး တှအေဝိုငျးတှေ အတှနျ့အတကျတှနေဲ့။ ဘယျသိမလဲ ရှငျ့သား ကိုချေါမေး ဟကေ့ောငျသူရ ဒါကဘာတှတေုနျး အာ အဖကေလညျး အဲ့တာ ကိုရီယားစာတှဗြေ ကြှ နျတျောခုအဲ့ဘာသာ စကားတကျ ပွီးလလေ့ာနတော အဖေ ဘာမှနားမလညျဘဲနဲ့မြား။
အေးလေ ငါမသိလို့မေးတာပေါ့ ငါ့မိနျးမသားရဲ့မသိလညျးအေးဆေးနပေါအဖရော အဖကေိုရှငျွး ပလညျးနားလညျမှာ မှမဟုတျတာ။ ဒါကိုဘေးက မိခငျဖွဈသူကွားတော့ မကျြနှာလေးညှိုးသှားတယျ။ ဖအဖွေဈသူက သူ့ဇနီးကိုခေါငျး ခါပွတယျ။
အဲ့လိုနဲ့ ညစားထမငျးစားပွီး အိပျရာဝငျခါနီးကွတော့ သားလုပျသူက အမနေ့ားကပျပွီး အမမေုနျ့ဖိုးပေးဦး မနကျသငျ တနျး တကျရငျသုံးမလို့ရော့သား တဈသောငျး ခွှတောသုံး သားတတျခငျြတာကိုသခြောသငျ လူငယျဆိုတာ ပြျောတတျရတယျ လလေ့ာသငျ့တာလညျး လလေ့ာရမယျ။
သားမအိပျသေးရငျ မငျးအဖအေင်ျကြီတှမေီးပူတိုကျလိုကျဦး။ အမေ အဖအေင်ျကြီတှမှော ပခုံးအသားတှကေအေ ရာငျဖြော့ပွီးဘာလို့ ပါးနတောလဲ? မိခငျလုပျသူက အတျောလေးနူတျဆိတျနပွေီးမှသား သဈပငျတဈပငျမှာ အသီးတှသေီးဖို့ အကိုငျးအခတျ တှပေငျစညျတှမေရှိပဲဖွဈပါ့မလား။
အမလေညျးအဖလေို့လညျး ဘာမှမသိဘူး။ ဘာတှမေေးမှနျးမသိဘူး။ ဟုတျတယျမငျးအဖကေဘာမှမသိဘူး ဘာမှလညျးမတတျဘူး သူတတျတာနှဈခုရှိတယျသိလား။ ဘာလဲ
သားမှတျထားပါ မငျးအဖပေညာတတျဘူး ဒါပမေယျ့ သူ့လုပျအားနဲ့တော့မငျးပညာတတျဖွဈနပွေီး ဒါပမေယျ့ မငျးကပညာကိုသိပဲသိသေးတာမငျးအဖလေောကျ ပညာမတတျသေးဘူး။ ဟားဟား အမကေလညျး အဖကေ မွနျမာစာတောငျဖွောငျ့အောငျမရေးနိုငျတာ ပညာတတျဖွဈမလား။
အမဖွေဈသူက တဈခှနျးပဲပွောလိုကျတယျ မငျးစီးထားတဲ့ ဖိနပျတောငျ မငျးအဖေ ရငျးထားတဲ့ပညာတှပေါ တယျ။ ပညာဆိုတာဘာလဲသား သိလား သိဖို့တတျဖို့ထကျ အမှားအမှနျကိုဝဖေနျပိုငျးခွားတတျတာကိုပညာလို့ချေါတယျ။
ခုသားက သငျညာသိပဲရှိသေးတယျ။ ပညာရှိမဖွဈသေးဘူး။ ဘဝမှာ ပညာသိ ၊ပညာတတျ ၊ ပညာရှငျဆိုပွီး သုံးမြိုး ရှိတယျ ကိုယျတိုငျသိနဖေို့ထကျ ကိုယျသိသလို သူလညျးနားလညျဖို့ဝမြှေရမယျ အဲ့လို့ဝမြှေဖို့လညျးဆနျသဈနရေမယျ။
လူတဈယောကျက အားလုံးသိပါတယျလို့ ကွှေးကွျောနပွေီဆိုရငျ သခြောတယျ။ သူဘာမှမသိသေးလို့ အတ နျးတကျ ပွီး အကနျးဖွဈနသေမြှတော့ပညာဆိုတာဝေးနဦေးမှာဟုတျကဲ့ ကြှနျတျောပညာနဲ့ဝေးနတေုနျးပါ လောကမှာ ဘာမှ မသိလို့မိုကျတာ ပွငျပေးလို့ရတယျ။ သိပွီးမိုကျတာက အတျောလေးကွောကျဖို့ကောငျးတာ။
အိမ်သူသက်ထား စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့ ခင်ပွန်းေ တွလုပ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်း ၁၀ သွယ်
Previous Article *မင်းအလုပ် မင်းလုပ်လေ*
Next Article ရေဦးမြို့နယ် အင်ပင်ရေကျေးရွာ အသက် (၂၇)နှ စ်အရွယ် အမျိုးသမီး မီးရှို့အသတ်ခံရ